Macalinka Xulka Qaranka Kubada Koleyga dalka Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyay Wadanka Nederlands [Sawirro]
Sabti 13 October 2012 SMC
Madaxii Wafdiga dalka Soomaaliya ugu qeyb galaayay Ciyaarihii Olompikada ee London 2012, ahna Macalinka Xulka Qaranka Kubada Koleyga dalka Soomaaliya Cumar C/qaadir Baarajab oo safar shaqo ku yimid Wadanka Nederland ayaa casho sharaf soo dhweyn, isla markaana lagu sii sagootinayay loogu sameeyay Magaalada Amsterdam ee Caasimada dalka Holland.
Casho Sharafta loo sameeyay Macalin Baarajab ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Hey'adda HIRDA ee fadhigeedu yahay Magaalada Amsterdam dalka Holland, iyadoona ay kasoo qeyb galeen Mas'uuliyiin Isboorti, iyo Qeybaha kala gedisan ee Bahda Isboortiga Soomaaliyeed kuwooda ku dhaqan dalka Holland.
Munaasabada lagu soo dhaweenayay Barajab ayaa waxaa khudbado isugu jiray dhiiri gelin, soo dhaweyn, iyo Taageerid ka jeediyay, xubno ay ka mid ahaayeen Agaasimiha Guud ee Hey'adda HIRDA Faadumo Faarax, Macalin Cumar C/qaadir Barajab, Agaasimihii hore ee Wasaarada Isboortiga dalka Soomaaliya, Abuukar Abanuur Maxamed, Mucjisaha Kubada Miiska Magan Tahir Yuusuf, Shamso Xasan oo Madax ka ah Hey'ad u dooda Xaquuqda Caruurta, Maxamuud Ibraahim, C/latiif Islow iyo xubno kale oo Marti sharaf ahaa.
Agaasimaha Guud ee Hey'adda HIRDA Marwo Faadumo Faarax, ayaa ugu horeyn ugu Mahad celisay Macalin Barajab Safarkiisa shaqo uu ku yimid dalka Holland iyo waqtiga uu la qeyb saday Bahda Isboortiga dalka Holland, isla markaana uu ugu warbixiyay dhaq dhaqaaq isboortiga dalka Soomaaliya, Taageerada ay u baahan yihiin guddiga isboortiga iyo sida ugu haboon ee jaaliyadaha Soomaalida iyo Guddiga Isboortiga ugu wada shaqeyn lahaayeen horumarinta Isboortiga dalka Soomaaliya.
Faadumo Faarax waxa ay sheegtay in Hey'adda Hirda Mar waliba ay ka qeyb qaadato Horumarinta Isboortiga Soomaaliyeed, isla markaana ay ka go'an tahay in ay sii wado dadaalka ay ugu jirto sidii ay u taageeri laheyd isboortiga Soomaaliyeed, iyadoona xustay in meesha kaliya ee dhalinta Soomaaliyeed lagu bad baadin karo ay tahay taageero buuxda oo la siiyo Isboortiga, waxaa ayna xilligaan xustay in ay taageeri doonto Kooxaha Wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee dhawaan ka qeyb gali doono Ciyaaraha Kubada Koleyga ee Afrika.
"Wax waliba dhaliil waa ay lahaan karaan, balse waxaa haboon in dhaliisa wax wanaagsan lagu saxo, Hadii aynu soomaali nahay waa waajib na saaran in aan taageerno wax waliba oo wanaag ah, si dadkeena iyo dalkeena aan ku hormarino, waxa aan taageereeno ma ahan shaqsi, waa calan, dal iyo qowmiyad dhan, Aniga ma ihi qof Isboortiga soo cayaaray, balse waan dareemi karaa gacanta uu u baahan yahay isboortiga" Ayeey Tiri Faadumo Faarax oo ku baaqday in la taageero Isboortiga Soomaaliyeed.
Macalin Cumar C/qaadir Baarajab oo dhankiisa Khudbad aad u qiimo badan ka jeediyay Munaasabada Casho Sharafta loogu sameeyay dalka Holland, ayaa waxaa uu Mahad celin iyo Hambalyo u jeediyay Bahda isboortiga dalka Holland iyo Hey'adda HIRDA sida Sharafta iyo Farxada ku dheehan oo ay usoo dhaweeyeen, isagoona ku tilmaamay bahda isboortiga dalka Holland, dad isboortiga jecel, kana go'an in ay horumariyaan, Taageeraan isboortiga Soomaaliyeed.
"Caawa waxa ay ii tahay habeen farxadeed, waa habeen aan la fadhiyo Saaxibo muddo badan igu danbeesay, saaxibo aan Warbaahinta kala socday, saaxibo wax qabadkooda aan la socday, iyo bah isboorti oo ka go'an jaceelka iyo Morumarinta isboortiga Soomaaliyeed, waan idin kaga mahad celinayaa soo dhaweynta sharafta leh ee aad ii fidiseen HIRDA, Faadumo Faarax iyo Bahda Isboortiga Holland" Ayuu yiri Macalin Barajab.